Xisbiyada mucaaradka ee gobolka Tigrey oo ka digay Musiibo bina’aadanimo oo wayn” haddii aan gobolkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loo gaarsiin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xisbiyada mucaaradka ee gobolka Tigrey oo ka digay Musiibo bina’aadanimo oo wayn”...
Xisbiyada mucaaradka ee gobolka Tigrey oo ka digay Musiibo bina’aadanimo oo wayn” haddii aan gobolkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loo gaarsiin.
Xisbiyada mucaaradka ee gobolka Tigrey ayaa waxay ka digeen “Musiibo bina’aadanimo oo wayn” haddii aan gobolkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loo gaarsiin.
Xisbiyadan ayaa waxay sheegeen in dadka ay bilaabeen inay u dhintaan gaajo, waxayna ugu baaqeen beesha caalamka inay arrintan soo faragaliyaan.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in gargaar la garsiiyay gobolka Tigrey islamarkana ay ka faa’ideysteen 1.5 milyan oo qof.
Xisbiyadan ayaa waxay sidoo kale sheegeen in 52,000 oo qof la dilay tan iyo intii uu dagaalka Tigrey billowday bishii November.
Sharraxaad kama aysan bixin qaabka ay tiradan ku ogaadeen, balse waxay sheegeen in dadkaasi ay ku jiraan carruur, haween iyo hogaamiyayaal dhanka diinta ah.
Dowladda Itoobiya ma aysan sheegin tirada ku dhimatay dagaalka gobolka Tigrey.
Xukuumadda ayaa sheegtay inay waddo howlgal “lagu xaqiijinayo kala dambeynta” kaasi oo ka dhan ah xisbigiii hayay talada Tigrey ee TPLF.
Dagaalka ayaa qarxay kadib markii xoogagga TPLF ay la wareegeen saldhig militari oo ku yaalay gobolkaasi taas oo ka dambeysay khilaaf dhexmaray iyaga iyo dowladda ra’iisul wasaare Abiy Ahmed.
Waxaa uu sidoo kale dagaalkan saameyn ku yeeshay ku dhawaad 100,000 oo ah qaxooti ka soo jeeda dalka Eritrea oo ku jiray xero ay Qaramada Midoobey maamusho oo ku talla gobolka Tigrey.
Afhayeen u hadlay hay’adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegay inay heleen warar sheegaya in qaar ka mid ah qaxootigaasi ay cuneen qolfaha geedaha islamarkana ay cabbaan biyo aan nadiif ahayn, ka dib markii goobihi ay daganaayeen lagu qasbay inay ka qaxaan.
Dad tiradooda ay ku dhaw dahay 2 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha gobolka Tigrey.
Dowladda ayaa si adag u xannibtay islamarkana ka hor istaagtay warbaahinta iyo hay’adaha gargaarka inay gobolka Tigrey galaan.
Isniintii, madaxa hay’adda NRC, Jan Egeland, ayaa sheegay in gargaarka gobolkaasi si aad ah loo xannibay.
Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen xisbiyada mucaaradka ee kala ah – the Tigray Independence Party (TIP), Salsay Weyane Tigray, iyo National Congress of Great Tigray – ayaa waxay ku sheegeen in haddii si dhaqso ah aan cunno iyo daawo loola gaarin gobolkaasi “in musiibada bina’aadnimo ee ku soo fool leh Tigrey ay noqon doonto xaqiiqo wayn”.
“Magaalooyiinka iyo tuulooyiinka ayaa lagu dumiyay hubka Altalariga oo si aan kala sooc lahayn loogu garaacay, xarumaheena caafimaadka iyo waxbarshada waa la dhacay oo la burburiyay waxa taas ka sii yaab badan in xarumiheena diiinta la weeraray islamarkana qalabkii barakeysnaa yaalay ayaa la dhacay ,” ayay bayaankooda ku sheegeen xisbiyadan.
Xisbiyada mucaaradka ayaa waxay sidoo kale ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan gobolka Tigrey looga soo saaro ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea islamarkana baaritaan madaxbanaan lagu sameeyo dambiyada dagaal ee la sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalamayay ay geysteen.
Toodobaadkii aanu soo dhaafnay ayaa waxaa uu Mareykanka ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidamada Eritrea halkaasi uga baxaan.
Dowladaha Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxay horey u beeniyeen in ciidamo Eritrea ka socda ay gobolka Tigrey ku sugan yihiin.
Guddiga fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa bishii September sheegay in go’aan kasta oo golaha Federeeshiinka ka soo baxa oo lagu joojinayo doorasho ka dhacda deegaankaasi uu ula mid yahay dagaal la iclaamiyey oo lagu soo qaadayo deegaanka Tigreega.
Previous articleNatiijo hordhac ah oo ka soo baxday tijaabadii tallaaka Ruushka sameeyay oo la ogaaday waxtarkisa 92%.
Next articleTaiwan oo billaabaysa barnaamij uu xukuumadda Somaliland uga caawinayo kor u qaadidda wax soosaarka beeraha deegaanada Somaliland.
Maxkamada CXDS oo amartay in lasoo qabto kooxihii shacabka ku dilay Galgaduud Gudoomiyaha Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida ee darajada Koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa...
War deg deg ah Madal ay ku mideysan yihiin Puntland ,Jubbland,Midoowga...
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Saaxibada...